Kazakhstana:Fanafihana vaovao fankahalàna pelaka, nanangona fanohanana an’ireo mpikatroka mafàna fo · Global Voices teny Malagasy
Kendren'ireo vondrona nasiônalista ireo mpikatroka / artista LGBTQ+ manerana ny firenena
Voadika ny 16 Aogositra 2021 14:31 GMT
hetsika tselatra fanoherana ireo LGBTQ+ tao Karaganda. 29 Jolay 2021. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube an'ny pôlisy ao Kazakhstana.
Tsy raharaha mora ny fikatrohana feminista sy LGBTQ+ ao Kazakhstana. Ireo izay mitolona ho an'ny zon'irey ireny dia tsy mitsahatra iharan'ny tsindry avy amin'ny governemanta, izay matetika tsy mahavita miaro azy ireo, sy ny avy amin'ireo vondrona nasiônalista mpifikitra amin'ny nentindrazana, izay mitombo be ety anaty tambajotra sy ivelany tambajotra.
Nandritra ny fitetezan-dry zareo an'i Kazakhstan, niatrika fanoherana isaky ny toerana nijanonany i Zhanar Sekerbayeva sy Gulzada Serzhan, olona roa mpitondratenin'ny vondrona Feminita, nitsangana tamin'ny 2015. Ny Feminita dia fikambanan'ireo mpikatroka LGBTQ+ izay tsy nitsahatra ny nanandrana hisoratra ho ONG, saingy efa im-betsaka nolavina ny fangatahan-dry zareo.
Tamin'ny Mey 2021, nandeha nankany amin'ny tanàna atsimo ao Shymkent i Sekerbayeva sy Serzhan mba hikarakara fihaonana iray hiresahana momba ny zon'ireo pelaka. Na efa nalamina mialohan'ny fotoana aza ny momba ny toerana handraisana, nosakanan'ny tompony tsy hiditra tao amin'ilay hotely tokony hanaovana ilay kaonferansa ireo mpikatroka. Raha iny niala handao ny hotely iny ilay vondrona feno hakiviana, mba hamindra ilay fihaonana ho ao amin'ny toerana fisotrona kafe tsy lavitra teo, nisy vondrona nasiônalista mpifikitra amin'ny nentindrazana nanafika an-dry zareo.
Ny ampitson'ilay fifandonana, nosamborin'ny pôlisy i Sekerbayeva sy Serzhan “ho fiarovana ny ain-dry zareo” ary ny ampitson'izany dia nentiny tamina fiara kely iray niverina nankao Almaty, tanàna fonenan-dry zareo.
Hetsika tselatra iray feno hatezerana mitovitovy tamin'izay no nitsena an'i Sekerbayeva, Serzhan, sy ireo hafa mpikatroka, nandritra ny fitsidihan’-dry zareo ny tao Karaganda, tanàna indostrialy iray ao afovoan'i Kazakhstana, tamin'ny 28 Jolay. Nohodidinin'ny pôlisy ilay toerana ary nentiny ho any amin'ny birao ireo mpikatroka, toerana namantarana ny mombamomba azy ireo. Tsy nalain'ny pôlisy am-bavany na iray aza tamin'ireo mpanao hetsipanoherana ny LGBTQ+.
Vantany vao tonitony kokoa ny toedraharaha, nalefan'ireo manampahefana tamin'ny alàlan'ny fiarandalamby nakany Almaty i Sekerbayeva sy Serzhan.
Toa samy mifofotra mafy tsy mitandro hasasarana amin'ny ezaka ataony ireo mpikatroka sy vondrona mpanohitra ny LGBTQ+. Tamin'ny 8 Aogositra, tao amin'ny tanànana avaratra-atsinanan'i Aktobe, nihoatra ny 100 ireo olona nifamory hanohitra ilay hetsika kely iray hafa nokarakarain'i Sekerbayeva sy Serzhan hatao ny 13 Aogositra.
Zavadehibe ny anamarihana fa, amin'ny ankapobeny ao Kazakhstana, aparitaky ny pôlisy daholo rehefa mety ho famoriambahoaka tsy nahazoana alàlana avy amin'ny mpitanana ny tanàna. Tao Karaganda sy Aktobe, nanara-maso ireo famoriambahoaka ry zareo manampahefana, saingy tsy nanao na inona na inona hanaparitahana azy ireo.
Tamin'io andro io ihany, nisy hetsika iray hafa fanoherana LGBTQ+ nitranga, raha nanomboka fanentanana ilay mpikambana ao amin'ny parlemanta sady mpandraharaha, Kairat Kudaibergen, ny hanaovana ankivy an'i Qańtar, mpanao sary fanaingoana avy ao Aktobe. Naverin'i Kudaibergen nalefa ny iray tamin'ireo sary nataon'i Qańtar misy sarin'olona roa mitovy fananahana mifanoroka no sady mitafy ny fitafy nentindrazan'ny Kazakh. Saingy hafatra feno fankahalàna ny azy fa tsy hafatra ho fanohanana.
Pikantsary azo tamin'ilay lahatsoratra efa nofafàna tao amin'ny instagram an'i Kairat Kudaibergen, nalefany ny 8 Aogositra 2021. Natolotr'i Qańtar, ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy eto.
Қазақтың ар-намысы мен салт-дәстүрін таптатпайық! STOP
Aoka tsy ho avelantsika hohitsakitsahan-dry zareo ny voninahitra sy ny fombandrazana Kazakh! ATSAHARO
Nanaovan'i Qańtar fitorohana ilay olana ary nangatahany ireo mpanjohy azy mba hitatitra io sotasota io, izay tsy hafa fa avy amina rangahy iray ihany izay nakasitraka ny hetsika iray fankahalàna LBGTQ+ nisy nidiran'ilay Pop-It toy malaza, ary tao anatin'izany dia nisy kazakh iray bilaogera nandoro ilay kilalao niparitaka be niloko avana, satria ho azy dia endriky ny “fampielezankevitra pelaka” ilay izy.
— Qańtar ? (@obobro300) August 8, 2021
Raha nantsoin'ny Global Voices, nolazan'i Qańtar ny fahasorenany sy ny hadisoam-panantenany nanoloana ireo fanafihana mivantana nataon'i Kudaibergen sy ireo hafatra feno fankahalàna taorian'ny nielezan'ny hafatra avy aminy.
Efa nisy foana ny fankahalana pelaka. Amin'izao fotoana izao izahay miresaka mismisy kokoa momba ny zonay ary tsy zakan'ireo marobe mpankahala pelaka izany. Tian-dry zareo ny hiverina any amin'ny fotoana nampangiana tanteraka anay sy tsy nahitàna anay.
Rehefa nanontaniana momba ny asa kantony, izay nivezivezy be tokoa fahiny, nolazain'i Qańtar fa “rangodrangotra fotsiny ihany ireny, tsy asakanto amin'ny endriny tena mivoatra,” tamin'ny fanasongadinana ny fomba fampiasàna izay rehetra mety ho fialantsiny azo ampiasaina hamelezana ny vondrom-piarahamonin'ny LGBTQ+.
Raha mihamaro ireo famelezana, na ety anaty na ivelan'ny media sôsialy sy eny an'arabe, dia vitan'ireo mpikatroka feminista ihany koa ny nikotrika hevitra hoe afaka hahazo fanohanana maro koa ny tolona fitakiana fitovian-jo. Ny hafatra fanehoana firaisankina voarain'i Qańtar, Sekerbayeva, ary Serzhan dia marika iray hoe manomboka mifàka ao Kazakhstana ny kabary feminista.
Zeorzia 9 ora izay